«Fa raha tonga ny Fanahin’ny Fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo.» (Jaona 16, 13-14)
Miavaka ity taona ity, satria hankalaza an’Andriamanitra noho ny faha-200 taona nahatongavan’ny Misionera nitory ny Filazantsara tany Madagasikara isika Malagasy. Amin’ny maha-mpikambana feno antsika FPMA ao amin’ny Fédération Protestante de France, dia nomena adidy manokana isika FPMA hampita sy hitondra any an-tanindrazana ny hafatra sy ny fiombonan’ny Protestanta rehetra aty Frantsa. Mahafaly sy isaorana an’Andriamanitra izany, kanefa tsy tokony hohadinoina ny fa manetsika antsika haneho ny fiombonana sy firahalahiana ary fampiraisana tokoa izany. Tamin’ny Pentekostra no nanehoan’ny kristiana voalohany ny atao hoe «Fiombonana » (Koinonia), araka voalazan’ny Asan’ny Apostoly 2, 42 hoe : «Ary izy ireo naharitra tamin’ny fampianaran’ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana.». Zava-dehibe ny fototra teolojika iorenan’ny Fiangonantsika, dia «Fiombonana manao asa misiona mba hizara fiainana ary fiainana be dia be» (Communion en mission pour partager la vie et la vie en abondance). Toa sarotra izany kanefa «Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin’ny zavatra rehetra, ka hitombo amin’ny asa tsara rehetra.»(II Korintiana 9, 8)
Arahabaina ireo Sampana iraisana efa samy nahavita ny Fihaonambeny tamin’ity taona ity (Sampana Tily, AMF nanao ny ChoeurUni faha-15 tany Toulouse). Irariana mba hahavita soa aman-tsara ireo mikasa hanao ny Fihaonambeny ihany koa amin’ity taona ity (AG Tanora Kristiana, Isantaonan’ny Sampana Fifohazana any Besançon, Fihaonamben’ny Sampana Vehivavy Kristiana sy ny Sampana Lehilahy Kristiana miaraka). Mampiomana sy mangataka antsika rehetra hitondra amam-bavaka ny Synoda Financier sy Fiofanan’ny Filoha rehetra sy ny Mpiandraikitra ara-bola, hatao amin’ny volana Jona ho avy izao eto Paris. Eo koa ny Synoda Lehibe hatao any Bordeaux amin’ny volana Novambra ho avy izao.
Ny Mpitandrina Synodaly, Filohan'ny FPMA
Dr Jean A. Ravalitera, Mpitandrina